ह्वात्तै घट्यो सुनको मूल्य, तोलाको कतिमा कारोबार हुँदैछ? हे’र्नुहोस्
Homeसमाचारह्वात्तै घट्यो सुनको मूल्य, तोलाको कतिमा कारोबार हुँदैछ? हे’र्नुहोस्
June 10, 2021 admin समाचार 3584
बिहीबार नेपाली बजारमा सुनको मूल्य प्र’तितोला तीन सय रुपैयाँले घटेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्य’वसायी महासंघका अनुसार आज सुन प्रतितोला तीन सय रुपैयाँले घटेर ९३ हजार ९०० रुपैयाँ कायम भएको हो । बुधबार बजारमा सुन प्रति’तोला ९४ हजार २०० रुपैयाँमा कारो’बार भएको थियो ।
महा’संघका अनुसार आज तेजाबी सुन पनि तोलामा ३०० रुपैयाँले घट्दै ९३ हजार ४०० रुपैयाँ कायम भ’एको छ । यता चाँदी भने गत बुधबारको मूल्यमा ५ रुपैयाँले वृद्धि हुँदै आज प्रतितोला एक हजार ३५५ रुपैयाँ कायम भएको महा’संघले जनाएको छ ।
यो पनि, नेपाल राष्ट्र बैङ्कले मंग’लबार एउटा विनियमावली जारी गर्यो जुन प्रत्यक्ष वैदेशिक लगा’नीसँग सम्बन्धित थियो । सो विनियमावलीले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउन नेपाल राष्ट्र बैङ्कको स्वी’कृति नभएपनि हुने व्य’वस्था गरेको छ । तर केन्द्रिय बैङ्कको यो नीति प्रति दुई थरीका धार’णाहरु बाहिर आउन थालेका छन् ।
कतिपयले स्वी’कृति बिना ल्याइने लगानीले कालोधन त भित्र्याउने होइन भन्ने आशंका गरेका छन् भने कतै केन्द्रिय बैङ्कले वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी भित्र्याउन सहज बना’एको भन्दै स्वागत गरेका छन् । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई राष्ट्र बैङ्कको स्वीकृति बिना ल्याउ’नुको फाइदा बेफाइदा के छन् त ? आम चासो’को विषय बनेको छ ।
बैङ्किङ क्षेत्रका विज्ञ अन’लराज भट्टराई राष्ट्र बैङ्कले लगानी भित्र्याउने व्यवस्था खु’कुलो पारेको नभइ प्रक्रिया सरल मात्र बनाएको बताउँछन् । नीति नियममा कुनै पनि सम्झौता राष्ट्र बैङ्क’ले नगरेको उनको बुझाइ छ ।
अर्को तर्फ विदेशी लगानी आउने वित्तिकै स्वदेशी उद्योग अथवा अर्थतन्त्र धरासायी पर्ने भन्ने आशं’का गर्नेलाई उनी भन्छन्, ‘भारतमा प्रत्येक वर्ष ७० अर्ब डलर’भन्दा बढी विदेशी रकम आउँछ । बंगलादेश र चीनमा पनि उत्तिकै वैदेशिक लगानी आउने गरेको छ । खै तिनीहरु धरासायी भएको ? उनीहरुकै अर्थतन्त्र मजबु’त छ ।’
यता, राष्ट्र बैङ्कका गर्भनर महाप्र’साद अधिकारीले पनि विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली २०७८ ले कालोधन भित्र्याउन कुनै सह’जीकरण नगर्ने स्पष्ट पारिसकेका छन् । विनियमावली सार्वजनिक पछि बोल्दै गभर्नर अधिकारीले मस्यौदा सार्वजनिक भएपछि सञ्चार माध्यमहरुबाट कालोधन भित्र्या’उन सहयोग गर्यो भन्ने खालका प्रश्न उठेको भन्दै त्यस’मा शंका नगर्न भनेका छन् ।
वैदेशिक लगानी भित्र्या’उँन सहज व्यवस्था गरेको भन्दै राष्ट्र बैङ्कको यो कदमको प्रशंसा भइरहेको छ । अब कोरोना’पछिको अर्थतन्त्रलाई गति दिन ठूलो रकम आवश्य’क पर्ने भएकाले वैदेशिक लगानीका लागि गरिएको सरल प्रक्रियाले लगानी आकर्षित हुने बैङ्क तथा वित्तीय संस्था परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष भोज’बहादुर शाहले बताए । परिसंघले विज्ञप्ति नै निकालेर आफुहरुले राख्दै आएको माग सम्बो’धन भएको बताएको छ ।
यता निजी क्षेत्र उद्योग परिसं’घले विनियमावलीको विनियम ३ मा विदेशी लगानी हुने कम्पनी तथा उद्योगमा दर्ता लगा’यतका सम्भाव्यता अध्ययन खर्च र पूर्व सञ्चालन खर्च बापतको विदेशी मुद्रा इच्छुक विदेशी लगा’नीकर्ताले बैङ्किङ प्रणाली मार्फत नेपाल भित्र्याउन विदेशी लगानीका लागि राष्ट्र बैङ्कको स्वीकृति अनि’वार्य नहुने व्यवस्थाले नेपालमा पूर्वाधार आयोज’नाको अध्ययन अघि बढाउन र उद्योग दर्ताका लागि विदेशी लगानीकर्तालाई सहज भएको बता’एको छ । रातोपाटीबाट
मन्दिरको ढोका नजिकै बसेको कुकुरले दर्शन गर्न आउने सबैलाई आशीर्वाद दिएको भिडियो एका एक भाईरल – हे’र्नुहोस
अब, राउटे बस्तीमा बा’हिरका मान्छेलाई प्रवेश निषेध !
June 7, 2021 admin समाचार 3325
गुर्भाकोट नगर’पालिका–११ का दुई युवतीमाथि यौन दुव्र्यवहार भएपछि प्रदेश सरकारले राउटे बस्तीमा बाहिरका मान्छेहरु’लाई प्रवेशमा रोक लगाएको छ । कर्णाली प्रदेशका मुख्य’मन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीका अनुसार मान्छेहरूलाई बस्तीमा प्रवेश रोक्नका लागि करिब तीन दर्जन सुरक्षाकर्मी खटाइ’एको
June 4, 2021 admin समाचार 3792
May 14, 2021 admin समाचार 4212